Kpido: otu jikọrọ ọnụ | Martech Zone
Sunday, Jenụwarị 3, 2016 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
N'oge na-adịbeghị anya, anyị na ndị mmadụ na-ere ahịa ihe ịma aka - ọtụtụ n'ime ha gbadoro ụkwụ na usoro na ezughi oke. Dị ka ọ dị na azụmaahịa inbound, ire ọhaneze abụghị naanị inye ụzọ ntinye aka, ọ na-ahapụ ozi dị mkpa maka atụmanya ịme nyocha nke onwe ha. Sellingre ahịa mmadụ na - ejikọ ihe atọ akọwapụtara - profaịlụ gị, nkwado mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ndị ọgbọ, yana ikike ịkekọrịta ma soro na-aga n'ihu na atụmanya mmekọrịta gị - Dịka
Monday, October 26, 2015 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Anyị ekenyela otu ị ga - esi bulie profaịlụ LinkedIn gị, mana kedu maka itinye LinkedIn na netwọkụ ma kwalite azụmahịa gị n'ịntanetị? LinkedIn bụ 277% dị irè maka ọgbọ ndu karịa Facebook na Twitter. Millionlọ ọrụ nde 2 ezipụwo ibe ụlọ ọrụ LinkedIn. Nke a bụ nke anyị. LinkedIn nwere ndị ọrụ 200 nde gafere mba 200 +. Ihe ndị a bụ ụfọdụ ọnụọgụ na - atụ ụjọ ma sụgharịa ya naanị otu ihe - LinkedIn bụ ezigbo netwọkụ azụmaahịa kacha mma na
Otu dị na LinkedIn maka ọganiihu Ahịa
Satọde, Febụwarị 22, 2014 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
LinkedIn abụrụla ebe siri ike maka azụmaahịa na ndị na-azụ ahịa azụmaahịa na ngalaba azụmaahịa ịchọta ma jikọọ na atụmanya ha na ndị ahịa ha. Ọ bụkwa nnukwu ikpo okwu iji tinye atụmatụ gị. Ndụmọdụ anyị dị ogologo maka ndị ọkachamara n'ahịa na ndị na-ere ahịa ka ha nọrọ ebe ndị na-ege ntị nọ… na enwere ike ịchọta ndị na-ege ntị na Otu Njikọ LinkedIn. Otu LinkedIn dị iche iche na-enye ndị ọkachamara n'otu ụlọ ọrụ ma ọ bụ nwere mmasị yiri ya